Akụkọ - ỊGỌRỌ BICYCLE RAD
Asọmpi ndị ọkachamara sitere na Western Europe, nke hiwere isi na France, Spain, Italy na mba ndị dị ala. Kemgbe etiti afọ 1980, egwuregwu a agbanweela nke ukwuu, ebe a na-eme asọmpi ọkachamara na kọntinent niile nke ụwa. A na-emekwa asọmpi ọkara ọkachamara na ndị na-amu amu n'ọtụtụ mba. Ọ bụ Union Cycliste Internationale (UCI) na -achịkwa egwuregwu a. Ya na asọmpi World Champions League nke UCI kwa afọ maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, nnukwu ihe omume bụ Tour de France, asọmpi izu atọ nke nwere ike ị nweta ihe karịrị ndị na-akwado ụzọ 500,000 kwa ụbọchị.
Ebe ndị ọkachamara na-agba ọsọ otu ụbọchị nwere ike ịdị ogologo ruo 180 kilomita (290 km). Ọmụmụ ihe nwere ike na -agba site n'otu ebe ruo ebe ma ọ bụ nwee otu okirikiri ma ọ bụ karịa nke sekit; ụfọdụ ọmụmụ na -ejikọ ha abụọ, ya bụ, were ndị na -agba ha site na mmalite wee jiri ọtụtụ okirikiri sekit mechie (na -abụkarị iji hụ na ihe nkiri dị mma maka ndị na -ekiri ya na ngwụcha). Asọmpi na obere sekit, nke na -abụkarị n'obodo ma ọ bụ etiti obodo, ka amaara dị ka ihe njiri mara. Ezubere ụfọdụ agbụrụ, nke a maara dị ka ndị nwere nkwarụ, ka ọ dabara ndị na -agba nwere ikike na/ma ọ bụ afọ dị iche iche; otu ndị na -agba ịnyịnya dị nwayọ na -ebu ụzọ ebido, na ndị na -agba ọsọ ọsọ na -amalite ikpeazụ wee nwee ike ịgba ọsọ ọsọ na ngwa ngwa ijide ndị asọmpi ndị ọzọ.
Oge nnwale onye ọ bụla (ITT) bụ ihe omume nke ndị na -agba ịnyịnya ígwè na -agba ọsọ naanị megide elekere na mbara ala ma ọ bụ na -atụgharị, ma ọ bụ n'okporo ụzọ ugwu. Nnwale oge otu (TTT), gụnyere oge mmadụ abụọ otu, bụ ịgba ịnyịnya igwe dabere n'okporo ụzọ nke ndị otu ndị na-agba ịnyịnya na-agba ọsọ megide elekere. N'ime ule otu na oge nke onye ọ bụla, ndị na -agba ịnyịnya ígwè na -amalite ịgba ọsọ n'oge dị iche iche ka mmalite ọ bụla wee dị mma na nha. N'adịghị ka ọnwụnwa nke oge ọ bụla ebe anabataghị ndị asọmpi 'ịse' (ịnyagharị na nsụda mmiri) n'azụ ibe ha, na ule oge otu, ndị na -agba otu n'otu na -eji nke a dị ka ụzọ aghụghọ ha, onye ọ bụla so na -atụgharị ihu n'ihu mgbe ndị otu ' nọdụ 'n'azụ. Anya agbụrụ dị iche site na kilomita ole na ole (nke na -abụkarị okwu mmalite, nnwale oge nke ihe na -erughị kilomita ise (8.0 km) tupu asọmpi agba, nke a na -eji amata onye na -agba ya yi uwe onye ndu na ogbo nke mbụ) ruo ihe dị ka kilomita 20. (32 km) na 60 kilomita (97 km).
Randonneuring na ultra-distance
Ọsọ ịgba ịnyịnya ígwè dị oke ogologo bụ ihe omume dị ogologo otu ebe elekere elekere na-aga n'ihu site na mmalite ruo n'isi. Ha na -anọkarị ọtụtụ ụbọchị, ndị na -agba ịnyịnya na -agbakwa oge n'usoro ihe nke aka ha, ebe onye mmeri bụ onye mbụ gafere akara ikpeazụ. N'etiti ultramarathon kacha mara amara bụ Race Across America (RAAM), agbụrụ na-anaghị akwụsị akwụsị, otu agba nke ndị na-agba ya na-ekpuchi ihe dị ka kilomita 3,000 (4,800 km) n'ihe dị ka otu izu. Ndị UltraMarathon Cycling Association (UMCA) nyere ikike ịgba ọsọ ahụ. RAAM na ihe omume ndị yiri ya na -enye ohere (ma na -achọkarị) ndị ọgba ọsọ ka otu ndị ọrụ kwado ya; enwekwara asọmpi ịgba ịnyịnya ígwè dị oke anya nke na-amachibido nkwado niile dị na mpụga, dịka Ọsọ Transcontinental na Race Wheel Indian Pacific.
Ọrụ metụtara randonneuring abụghị naanị ụdị ịgba ọsọ, kama ọ gụnyere ịgba ịnyịnya na-ekpebisi ike n'ime oge a kapịrị ọnụ.